उपत्यकामा संक्रमण बढे संगै पीसीआर परीक्षण व्यापक गर्ने तयारी – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
कोभिड- १९ अपडेटशिक्षा/ स्वास्थ्यसमाचार
By डिजिटल खबर Last updated Jul 9, 2020 6
२५ आषाढ, काठमाण्डाै । कोरोना भाइरस रोगले राजधानी उपत्यकालाई च्याप्न थालेपछि सरकारले व्यापक रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । राजधानी उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेसँंगै सरकारले उपत्यका तथा बाहिर ४५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडाँैं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
BusinessCorona UpdatesCoronavirusCOVID-19Digital KhabarEconomicKathmandu ValleyLockdown
काठमाण्डाै महानगरपालिकाकाे ३० बढी पार्क निर्माण गर्ने याेजना